Aqalka Senate-ka Mareykanka oo ka barri yeelay dacwadihii lagu soo oogay M/weyne Trump… – Hagaag.com
Aqalka Senate-ka Mareykanka oo ka barri yeelay dacwadihii lagu soo oogay M/weyne Trump…
Posted on 6 Febraayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Aqalka Senate-ka Mareykanka ee uu hoggaamiyo xisbiga Jamhuuriga ayaa cod u qaaday labadii eedeymood ee lagu soo oogay M/weyne Trump, kaddibna laalay labadii danbi ee lagu soo eedeeyey madaxwenye Donald Trump.
Xubnaha aqalka wakiillada ee Dimoqraadiga hoggamiyo ayaa bishii December Senate-ka u soo gudbiyay laba danbi oo ay ku soo oogeen Trump oo kala ahaa; ku takrifalid awooddeed iyo is-hortaagid baaritaanka congress-ka.
Aqalka Senate-ka ayaa dhageystay qareennada ka socday aqalka wakiiladda iyo waliba qareennada difaacayay madaxweyne Trump, waxaana Arbacadii ay cod u qaadeen labada qodob.
52 mudane oo Jamhuuri ah ayaa codka “Ma gelin” ugu coddeeyay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyay, halka 48 mudane ay oggolaadeen.
53 mudane oo Jamhuuri ah ayaa codka “Ma gelin” ugu coddeeyay qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyay, halka 47 kalena ay oggolaadeen.
​Mitt Romney ayaa noqday mudanaha kaliya ee Jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha Dimoqraadiga kaddib markii “HAA” ugu codeeyay qodobka koowaad ee dhigayay in madaxweynuhu uu ku takri falay awooda, iyadoo go’aanka aqalka Senate-ka uu soo afjaray dacwadda ka dhanka ah madaxweynaha.